Nzira yekugadzirisa sei Kushandurwa kweWebhu uye SEO nenzira yakanakisisa?
Apo webhusaiti yako yepamusoro pakusimudzirwa kutengesa zvakawanda pamusoro pehupenyu hwemagetsi se simba rekugadzirisa, iwe unofanira kufunga nezvekukurukurirana kwakapfupi. Ndinotenda kuti mutsvaga wega wepaIndaneti urikusimudzira mapurogiramu anofanira kugara achivimba neWebhu rakanaka uye kukura kwe SEO, zvose zviri pedyo noruoko. Ngatitsvakei - Tsvaga Engine Optimization inowedzera pamusoro pekutsvakurudza mashoko ezvinyorwa, zvakatsigirwa nehuwandu hwehuwandu hwekutsvaga. Asi kune huri huzhinji hutano hwezvinhu hunowanzouya shure kwechiitiko. Asi kunyanya nyaya idzi dzehutano dziri kugadzirisa imwe peji yepawebhu iri muurongwa hweSERPs. Ndinoreva kuti kana uchiita SEO yako, iwe unofanira kugara uchitarisa nzira yakarurama yekunyoresa paji peji rako rese, kubvira pakutanga.
Iko kugamuchirwa nekunyoresa
Chinhu chokutanga chinofanira kuitwa kumapeji ose ewebhu, uye SEO kukura, chikamu chimwe nechimwe chebhuku rako rewebhu ndechekusvikika kwekutsvaga, ndinoreva kuti hapana chakavhara marobhoti anokambaira kubva "kuverenga" chimwe nechimwe chezvinhu zvako zvekudhakwa. Kuita izvi nenzira iyi, ndinokurudzira kushandisa "Kutora" murayiriro muchikamu cheChawl cheGoogle Search Console kuti uone kutarisa kwekutanga kwewebsite yako, kubva pakuona kwezvinjini. Pane imwe chete mazano ekutanga pano - edza kuchengeta zvinhu zvose mu HTML maitiro, zvingorega kushandisa Flash kana Silverlight pamapeji ako ewebhu ekukosha kukuru. Kana zvinhu zvose zvichitarisa zvakanaka, uye webhusaiti yako inonyanya kuongororwa, pasi apa iwe uchaona mazano mashomanana ekutsvaga kwehutano hwevashandisi, uyewo zvingave yakakwirira yepamusoro kuti igoverwe nenjini dzekutsvaga.
Iva nema URL akachena
Peji yako yepaIndaneti URL ndeyezvinhu zvekukosha kwepamusoro, zvose pamusoro pekuvandudzwa kweWebhu uye SEO, uye nehuwandu hunoshandiswa nevashandisi. Ita kuti URL dzako dzive nyore sezvazvinogona kuti dzive "kunzwisiswa" nemabhoti ekutsvaga, uyewo kuverengwa nevanonyatsoshandisa. Bvisa chero ruzivo rwe URL rusingadikanwi, runogona kuunza kuvhiringidzika kuGoogle pachayo kana vanhu vanoshanyira mapeji ewebhu. Kubva kune rumwe rutivi, usina ruzivo rwehu URL dzako huchaita kuti vanhu vashoma kudarika, kwete kuti vataurire. Panguva imwecheteyo, injini dzinotsvaga dzingaita sekutarisana nedambudziko rimwechete apo "kunzwisisa" kunokosha kune rimwe shoko rinokosha.
Kuongorora peji yewebhu yakakodzera uye kukura kwe SEO, tora URL dzako dzakagadziriswa nemitemo inotevera:
Yese yewebhu peji URL inofanira kunge yakaipfupi uye inodzidzisa sezvinobvira. Ndinokurudzira kubatanidza URLs neyakarurama uye yakakosha mazwi kana mitsara, kuti ienzane newebsite yako musoro.
Usambofa uine URL yako yakasvibiswa nemashoko makuru, chengetedza nzira yekunyora zvakajeka sezvinogona. Kuita kudaro, yeuka kusabvisa mazwi ekumira pamatambudziko ose (akadai seaya anonyanya kuitika: ",," "," ",," ",". )
Tishandise nguva dzose maitiro ekuparadzanisa mazwi ekutevedzana mune ma URL. Kanganwa pamusoro pekunyepedzera, sezvo injini dzekutsvaga dzisinganyatsozvizivi. Izvo zvinowanzounza hutu hwakakosha hunogona kukwira nekunyora.
Chengetedza mutsara wakakosha mutsara nekuisa mazwi ako ekukosha kwepamusoro pedyo nekutanga kwe URL imwe neimwe. Yeuka, kuti maererano nemaonero avo, mabhii ekutsvakurudza mabhodhi ari kuisa zvakanyanya kukurudzira kune avo vanozove-vatanga kunyanya mazwi.
Nenzira, pane imwe chikonzero chekuti uchengete URL dzako shoma sezvinobvira, ini. e. , kuchengetedza uye kuwedzera kukosha kwese kwemashoko ako mu URLs. Panguva imwe chete, zvisinei, dzokera zvakare URL dzako nemaune, sekunge zvaive zvingongova zvinyorwa zvekuverenga kwako kunyora. Kuita kudaro, uchawana chero spam kana matambudziko ehutano hwehutano hwakaderedzwa kusvika pakaderera Source .